बिष्णु पौडेलको चुनौतिः बृद्धभत्ता बृद्धि गलत भन्ने हिम्मत छ कसैको? - हिमाल दैनिक
बिष्णु पौडेलको चुनौतिः बृद्धभत्ता बृद्धि गलत भन्ने हिम्मत छ कसैको?
२० जेष्ठ २०७६, सोमबार १४:५१
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव बिष्णु पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धिको आलोचना गर्नेहरुलाई हिम्मत भए त्यसको सार्वजनिक रुपमा गलत हो भन्न चुनौति दिएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा जारी सैद्धान्तिक छलफलमा सोमबार भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलले बजेटमा गरिएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी रकम विनियोजना लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा वमोजिम भएको बताए।
‘यसमा आलोचना पनि भएको छ तर, हाम्रो राज्य लोककल्याणकारी सिद्धान्तबाट बाहिर जान सक्दैन। सरकारले लिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको कुरामा कसैले हिम्मत भए बृद्धभत्ता बढाउने विषय गलत छ भन्न चुनौति दिन्छु,’ उनले भने।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले अघि सारेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताकै आधारमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट ल्याएको उनले दाबी गरे।
सरकारले चालु वर्षलाई ‘सुखी नेपाली संमृद्ध नेपाल’को आधार वर्ष र यसका आधारमा आगामी वर्षलाई तिब्र आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने लक्ष्यसहितको वर्ष बनाउने गरी ठिक दिशा र गन्तव्यमा यस पटकको बजेट आएको उनले बताए।
बजेटले उत्पादन शक्तिको विकास र उत्पादनमा अग्रगामी रुपान्तरण गरी लक्ष्य हाँसिल गर्न केन्द्रीत भएको र त्यसका लागि पर्याप्त स्रोतको परिचालनको अवधारण अघि सारेको पनि उनले बताए।
सिंचाई, विमानस्थल, रोड र रेलमार्ग लगायतका पूर्वाधार विकास आयोजनामा सन्तुलित बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ छ।
हुलाकी राजमार्ग निरन्तरको प्रवचनको विषय बन्दै आएको बताउँदै यसपटकको बजेटले त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा प्रगति हुनसक्ने आधार तयार पारेको दाबी पौडेलको थियो।
यसैगरी मध्य पहाडी लोकमार्गदेखि उत्तरदक्षिण मार्ग तथा ठूला योजना अगाडि बढाउने स्वस्थ्य विन्यासले अर्थतन्त्र गतिशिल भएर अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए।
बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइको क्षेत्रमा आम नेपालीको पहुँच बढाउने तर्फ लक्षित गरी शिक्षाको गुणात्मक फड्को मार्ने संकल्प लिएको छ। पछाडि परेको समुदायलाई पक्षपोषण गरी सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको प्रसंशा गरे।
यो बजेटले संविधान र चुनावी घोषणापत्रले गरेको दिशा निर्देशलाई नै आधार बनाएर आएको बताउँदै कोही भोकै पर्दैन र भोकले कोही मर्दैन भन्ने संकल्पका साथ बजेट आएको उनको धारणा छ।
बजेटले विधिको शासन र सुशासनको क्षेत्रमा पनि सहि विनियोजन गरेको मात्र नभई कृषि, उद्योग, बनको क्षेत्रमा गरेको बजेटले देशभित्रको उत्पादन बृद्धि र व्यापार घाटा कम गर्ने बताए।
बजेटले राजस्व नीतिका सन्दर्भमा पनि सहि र संगतीपूर्ण कदम लिएको छ। निर्यात बृद्धि र अनावश्यक बस्तुको आयातमा नियन्त्रणको विषय पनि सकरात्मक छ रहेको तथा यसले उद्यमशिलता बढाउने र रोजगारी बढाउने आधार तयार पारेको बताए।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको अवस्थामा बजेटले सुधारको प्रयास गरेको छ।
बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने ८.५ प्रतिशत भन्दा बढि आर्थिक बृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिनु सकरात्मक छ।
Prevपछिल्लोअर्थमन्त्रीमाथि रिजालको व्यंग्यवाणः राजनीतिक भवितव्यको सन्त्रासमा बजेट पर्यो
अघिल्लोखुदाकाे सट्टा जुदा लेखेकाे बजेटलाई समाजवाद उन्मुख भन्ने पाखण्ड नगराैँNext